Isdiiwaangelinta Ciyaarta Fiidiyowga Humble waxay hoos u dhigi doontaa Taageerada Mac | waxaan ka imid mac
Qolka Ignatius | | Mac OS X, Noticias
Humble waa mid ka mid ah aaladaha yar ee loo heli karo Mac oo bixiya adeeg isdiiwaangelin bishiiba mar beddelkeeda helitaanka tiro badan oo ciyaaraha fiidiyowga ah, madal sidoo kale diyaar u ah Windows iyo Linux labadaba.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay shirkaddu ku shaacisay email-ka ay u dirtay dhammaan macaamiisheeda, laga bilaabo 1-da January, waxay bilaabi doontaa nooc cusub oo ganacsi oo u baahan codsi cusub, codsi cusub Waxa kaliya oo loo heli karaa Windows.
Sidan oo kale, waxay hoos u dhigi doontaa taageerada Linux iyo macOS labadaba. Xulashada Humble Choice waxay siisaa macaamiisha marin u helka xulashada 10 ciyaarood oo ay waligood hayn karaan.
Ilaa hadda, goobtani waxay soo bandhigtay qorshooyin isdiiwaangelineed oo kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, laga bilaabo Febraayo 1, waxay hoos u dhigi doontaa dhammaan qorshayaasha hal waxayna kaliya diyaar u noqon doontaa Windows, qayb war ah oo sii xumaynaysa xidhiidhka ka dhexeeya macOS iyo ciyaaraha.
Sida ku cad waxa aan ka akhrin karno emailka in loo diray dhammaan isticmaalayaasha madalkan, via Neowin:
Waxaan rabnaa inaan ku ogeysiino in laga bilaabo Febraayo 1, noocyada Mac iyo Linux ee ciyaaraha bilaashka ah ee DRM ee hadda ku yaal Humble Trove aan la heli doonin.
Xubin ka ah Humble Choice, waxaad wali soo dejisan kartaa si aad ugu hayso ururintaada gaarka ah ilaa Janaayo 31. Waxay sii ahaan doonaan inay ka dhex helaan abka cusub ee Humble ee kuwa isticmaalaya Windows.
Dhammaan ciyaaraha lagu qaybiyay goobtan iyada oo loo marayo goobo kale, hadday yihiin asal ama Steam, ma saameyn doonto tallaabadan cusub.
Isticmaalayaasha kuwaas oo lahaa wax rajo ah in madal lagu qaabilay gacmo furan tiro badan oo magacyo leh oo la bilaabay Apple Silicon, mar hore waa la iloobi karaa.
Sida horumariye Steve Troughton uu leeyahay:
Xumaanta iyo qulqulka nidaamka deegaanka ciyaaraha Mac aad bay u murugaysan yihiin in la arko. Apple waxay ku gubtay buundooyin badan oo leh 32-bit hack, dhimista taageerada OpenGL, iyo notayeynta qasabka ah. Ma aha in la xuso sannadaha waxqabadka GPU ee qiimaha gorgortanka.
Ku-tiirsanaanta ciyaaraha iOS waxba ma joojinayso isbeddelkan baahsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Isdiiwaangelinta Ciyaarta Fiidiyowga Humble waxay hoos u dhigi doontaa Taageerada Mac
Apple si ay u xirto wareegga on Apple Silicon dhamaadka sanadkan